अस्ट्रेलियामा कोरोनाविरुद्धको खोप परीक्षण- विश्व - कान्तिपुर समाचार
सिड्नी — यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रामाणिक खोप तयार गर्ने लक्ष्यका साथ एक अमेरिकी कम्पनीले अस्ट्रेलियामा परीक्षण सुरु गरेको छ । बुधबार सुरु गरिएको परीक्षणअन्तर्गत पहिलो चरणको परीक्षणमा अस्ट्रेलियामा १ सय ३१ जना स्वयंसेवीलाई खोप दिइने अमेरिकी कम्पनी नोभाभाक्सले जनाएको छ ।
कम्पनीका अनुसन्धान प्रमुख डा. ग्रेगरी ग्लेनले पहिलो चरणमा खोप लिएकाहरूमा यसको प्रभावकारिता परीक्षण गरी अन्य कदम चालिने बताएका छन् ।
ग्लेनले नोभाभाक्सको मुख्यालय मेरिल्यान्डबाट भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गर्दै भनेका छन्,‘हामी समानान्तर डोज बनाउँदैछौं र हामी यस वर्षको अन्तमा खोप सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन सक्षम हुनेछौं ।’
कोरोना भाइरसविरुद्ध विश्वभरका दर्जनौं वैज्ञानिकले खोप परीक्षण गरिरहेका छन् । यसका लागि खासगरी अमेरिका, बेलायत, चीन, इजरायल, सिंगापुर र केही युरोपेली देश अग्रपंक्तिमा छन् । तर अहिलेसम्म कुनै पनि खोप सुरक्षित र प्रभावी साबित भइसकेका छैनन् । वैज्ञानिकहरूले खोप निर्माणका लागि लामो समय लाग्ने बताइरहेका छन् ।
पशुहरूमा गरिएको परीक्षणमा खोपको न्यून डोज प्रभावकारी देखिएको ग्लेनको भनाइ छ । नोभाभाक्सले यस वर्ष कम्तीमा १० करोड डोज र अर्को वर्ष सन् २०२१ भित्रमा १.५ अर्ब डोज उत्पादन गर्ने उनको भनाइ छ । ‘एनभिएक्स कोभ–२३७३’ नाम दिइएको खोपको उत्पादन गर्न गत मार्चयता नर्वेस्थित एक संस्थाले ३८ करोड ८० लाख डलर लगानी गरिसकेको छ,’ ग्लेनले भने ।
मेलबर्न र ब्रिसबेनमा क्लिनिकल परीक्षणको पहिलो चरणको नतिजा जुलाईमा प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको नोभाभाक्सले जनाएको छ । त्यसपछि विभिन्न मुलुकका हजारौं व्यक्तिलाई दोस्रो चरणको परीक्षणका लागि समावेश गरिनेछ ।
अस्ट्रेलियाको सहयोगी संस्था न्युक्लियस नेटवर्कका संक्रामक रोग विशेषज्ञ पल ग्रिफिनले मेलबर्नमा ६ जना स्वयंसेवीलाई खोप दिएर कार्यक्रम सुरु गरिएको जनाए
कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन निर्माणको दौडमा को-को छन् ?
प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७७ ०७:२७
जेष्ठ १५, २०७७ एएफपी
बर्लिन — जर्मन बुन्डेसलिगामा १० खेलाडीमा सीमित लाइपजिगले बुधबार राति घरमा हर्था बर्लिनसँग २–२ को बराबरी खेलेको छ । यो बराबरीपछि उसले अंक तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लने मौका गुमाएको छ ।
क्रस्जटोफ पिटेकले पेनाल्टीबाट खेलको अन्त्यतिर गोल गरेपछि बर्लिनले बराबरी नतिजा निकालेको हो । गत साता पनि घरमै भएको खेलमा लाइपजिगले फ्राइबर्गसँग बराबरी खेलेको थियो ।
तेस्रो स्थानमा रहेको लाइपजिग बोरुसिया डर्टमन्डभन्दा दुई अंकले पछाडि छ । डर्टमन्डलाई यसअघि हराएको बायर्न म्युनिख सात अंकको अग्रताले शीर्ष स्थानमा छ । बुधबारको अर्को खेलमा साल्के रेलिगेसनको डरबाट गुज्रिरहेको फोर्टुना डुसलडोफको हातबाट २–१ ले पराजित भयो । साल्केको यो लगातार तेस्रो हार हो ।
यस्तै अन्य खेलमा होफेनहाइमले कोल्नलाई ३–१ ले हरायो भने युनियन बर्लिन र माइन्जले १–१ तथा पार्डाबोन र आउग्सबर्गले गोलरहित बराबरी खेले ।
प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७७ ०७:२६